चिकित्सा त्यहाँ नैदानिक अवस्थामा आंत्र रोग छौं। बच्चा rectal स्थानच्युति पनि एक साधारण समस्या भनिन्छ गर्न सकिन्छ। मार्फत आफ्नो पछि हानि संग distal पर्खालहरु को विकृति को अफसेट छ गुदा orifice।
किन छोराछोरीको आंत्र को हानि गर्छ?
सामान्यतया, रोग प्रारम्भिक बाल्यकाल मा निदान छ। यस मामला मा,5वर्ष मुनिका पुरानो हो जसले केटाहरु धेरै susceptible रोग हो।
हामी विस्तृत छलफल अघि बच्चा मा rectal स्थानच्युति र यसको pathogenesis, यो मूल्य रोग स्वतन्त्र दिइएको समस्या मान्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई ध्यान छ। अक्सर यो विभिन्न रोग अवस्था एक परिणाम रूपमा देखिन्छ। वयस्क, साथै एक बच्चा, को क्षति rectal मुख्यतया कारण भित्री-पेट दबाव मा वृद्धि गर्न। बारी मा, यो प्रक्रिया र रोग को मूल र गठन मूल कारण हुन छलफल कारक अनुकूल। तिनीहरूले दुई समूह विभाजित छन्।
रोग उद्भव गर्न Predisposition
पहिलो रोग ट्रिगर कि predisposing कारक हो। ती हुन्:
जन्मजात झुकाव। कारण हड्डी lumbosacral प्राकृतिक concavity को क्षेत्र मा6वर्ष को उमेर मुनिका बच्चाहरु बरु weakly व्यक्त भन्ने तथ्यलाई गर्न। कारण lordosis र pelvic झुकाव को अभाव गर्न अपर्याप्त मलाशय सरल छ। वृद्धि अंतर-पेट दबाव संग, सम्पूर्ण लोड गुदा हस्तान्तरण गरिएको छ।
को डगलस ठाउँ को गहिराई। को यो मूल्य थप (जवान छोराछोरीको विशेषता छ जो), कम पेरिटोनियम मा vesico-आंतों indentations छन्। जब उच्च दबाव बच्चा मा विकृति विकास लागि मान्य आधारमा गर्दछ अगाडि पर्खाल invagination मा हुन्छ। Rectal स्थानच्युति बाल्यकाल अन्य anatomical सुविधाहरू को उपस्थिति मा हुन सक्छ: लामो mesentery, छाडा प्रकार intraenteric धमनिहरु, आदि ...
अन्य जठरांत्रिय रोगहरु कुपोषण वा अविवेकी रुचाउने कारण। यस मामला मा, असामान्यता कारण असामान्य pelvic तल्ला मांसपेशीमा र paraproctium मा degenerative परिवर्तन गर्न विकास।
प्राप्त कारक आंत्र को हानि कारण छ कि
causative कारक को दोस्रो समूह समस्या को उद्भव लागि सुरूवात बिन्दु रूपमा सेवा जो पाचन प्रणाली र जठरांत्रिय पर्चा, को कामकाज मा disturbances प्राप्त छन्। बच्चा rectal स्थानच्युति अक्सर कुर्सी को उल्लंघन कारण उत्पन्न (आमाबाबुले यस मामला मा के गर्नु पर्छ, विशेषज्ञ भन्छु, त्यसैले बच्चालाई उपचार आफ्नै कदम लिन कडा सिफारिस गरिएको छ)। नियमित कब्जियत को रूप मा defecation को कार्य समयमा अफ्ठ्यारो - रोग को सुरूवात आधारभूत संयन्त्र। बारम्बार straining र पट गर्न लामो समयसम्म जोखिम adversely गुदा स्फिन्क्टर अवस्था असर गर्छ।
यसैबीच, एकदम अक्सर, र अन्य कारक छोराछोरीको rectal स्थानच्युति provokes जो intraperitoneal गुहा मा दबाव मा वृद्धि, सक्छ। यो रोग घटना को कारण अक्सर hysterical खोकी ब्रोंकाइटिस मा झूठ, वा कठिनाई वी डी (उदाहरणका लागि, केटाहरू मा phimosis)।
यसबाहेक, यस गम्भीर विकृति को प्रकटीकरण को लागि, सामान्यतया कारक को एक निर्णायक भूमिका संयोजन खेल्छ। प्रायजसो, एक वा माथिको समस्या बढी उपस्थिति, एक बच्चा मा rectal स्थानच्युति बिस्तारै हुन्छ।
छोराछोरीको लक्षण को सुविधाहरू
यो रोग को खतरा यसको लक्षण लामो समय पूर्ण अदृश्य रहन सक्छौं लागि पहिलो हो भन्ने छ। कारण rectal mucosa को हानि छ। बच्चाहरु, यो सबै भन्दा अक्सर एक-पक्षीय र चरणमा हुन्छ। defecation को प्रेरित समयमा आंशिक अल्सर साइट पतन र प्रक्रिया पछि फेरि स्फिन्क्टर पछि लुकाइएको छ।
यो समयमा, बच्चालाई आमाबाबुले राता गुदा क्षेत्र, एक गहना resembling नोटिस सक्छ। यो वास्तवमा फिक्री एक प्रकटीकरण आमाबाबुले देखेको हुनुपर्छ छ। Spotting गुदा staining पनि हानि आन्द्रा को स्पष्ट चिन्ह रूपमा सेवा गर्दैछन्। प्रगतिशील रोग थप गम्भीर लक्षण विशेषता। यो विशेषता बीचमा एक थोडा bluish रङ्ग मा एक भट्ठा वा तारा आकारको प्वाल सकिन्छ।
प्रगतिशील रोग को संकेत
साथै, यो गुदा स्फिन्क्टर को टोन खुलिरहेको एक लामो समय को लागि, दायाँ भारी आन्द्रा precipitated, त्यसैले कुनै पनि प्रयासहरू बच्चा मा पीडादायी sensations सँगसँगै छन्। Rectal स्थानच्युति पछि जसबाट गुदा नहर फिर्ता भाग सक्छन् पहिले नै सजिलै precipitated सीधा को pelvic तल्ला को hypotension musculature नै प्रकट, तर एक पल्ट यो भन्दा पछि गिरावट हुन्छ।
को विकृति चलिरहेको बेला, ड्रप-डाउन भाग अक्सर एक महत्वपूर्ण आकार, कहिलेकाहीं सम्पूर्ण शरीर लम्बाइ बनाउने प्राप्त। छोराछोरीको प्रत्येक rectal स्थानच्युति (फोटो नैतिक कारण उपस्थित हुन सक्दैन) तपाईं सानो शारीरिक प्रयास संग हाच्छिउं गर्नु वा खोकी गर्दा, उदाहरणका लागि, जाँच नगरिएको हो। अक्सर यो तत्व सुशील सीधा स्वयं। बाह्य स्फिन्क्टर को कमजोरी कहाँ विशाल समस्या छ बच्चा, को रोग अवस्था बढन योगदान fecal असंयम।
एउटै समयमा स्फिन्क्टर मांसपेशीमा को contractility को संरक्षण रोग को विकास मा नकारात्मक असर र mucosa एक उल्लङ्घन जस्ता जटिलताहरू गर्न सक्छ। यस मामला मा बच्चा जरुरी सर्जरी आवश्यक छ।
आंत्र को हानि को उपचार कस्तो छ?
आमाबाबुले तुरून्त तपाईंको बच्चा यो समस्या बाँच्न सक्दैन विशेषज्ञहरु गर्न लागे। अक्सर, रिकभरी लागि पूर्वानुमान धेरै अनुकूल छ। साथै, चिकित्सा को रणनीति वयस्क विरामीहरु को उपचार तुलनामा अधिक रूढिवादी छ। एकै समयमा मानिसहरूको मा यो बच्चाहरु मा rectal स्थानच्युति हटाउन असम्भव छ हो। उपचार केही लागूपदार्थ र प्रक्रियाहरु को प्रयोग समन्वय, केवल विशेषज्ञहरु को पर्यवेक्षण अन्तर्गत ठाउँ लिनुपर्छ।
व्यक्तिगत, रोग को नैदानिक manifestations आधारमा बच्चा र रोग को लामो समयसम्म अवधि रहेको, डाक्टर तीन भिन्नता चिकित्सा को एक prescribes:
रूढिवादी उपचार योजना;
पहिलो विकल्प5वर्ष मुनिका बच्चा मा rectal स्थानच्युति लागि उपचार भन्दा साधारण र लोकप्रिय छ। उपचार यस प्रकारको सबैभन्दा अवस्थामा देखाइएको छ mucosal को हानि मा र बच्चाहरुका लागि। यो जटिल बहाली उपायहरूको मुख्य उद्देश्य छलफल गरिनेछ:
प्रकृति र कुर्सी, मल को कुनै पनि उल्लंघन को उन्मूलन को स्थिरीकरण;
सामान्य आंतों खाली मोड को प्रारम्भिक स्थापना;
शक्ति समायोजन समयमा सबैभन्दा उपयुक्त आहार को चयन।
यो हासिल गर्न बाटो मात्र आहार चिकित्सा मदत संग सम्भव छ। रोग को मूल कारण निर्मूल - उच्च पेट दबाव - आवश्यक राहत प्रभाव संग optimally उपयुक्त आपूर्ति सर्किट चयन वा बन्धन अनुरूप द्वारा। डाक्टर को सकारात्मक गतिशीलता को अभाव मा विशिष्ट लागूऔषधको प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ।
पट बिना उपचार
सही defecation शासन स्थापना गरिनेछ एक पटक, यो शून्य गर्न बारम्बार चाहनाको देखि बच्चा सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। को pelvic मांसपेशीमा र आफ्नो कार्यात्मक जडानहरू पुनर्स्थापना गर्न, उल्लंघन जो Komorowski सम्भावित तनाव र straining कम गर्न सिफारिस गरिएको छोराछोरीको rectal स्थानच्युति गराउँछ। नियम, बच्चा को उपचार potty वा शौचालय प्रयोग गर्न दिइएको छ, defecate उहाँले गर्नुपर्छ supine वा खडा स्थिति विशेष। गुदा कुनै लोड - यो रोग उपचार को आधारभूत अवस्थाको एक, र यो बिन्दु धैर्य को धेरै आवश्यक र आमाबाबुको भाग मा ख्याल।
अक्सर पूर्ण रिकभरी मोड बारे 3-4 महिनाको अवधिको लागि एक डाक्टर मिल्दोजुल्दो छ। यो उपचार को सफलता वस्तुतः सिद्ध परिणाम ग्यारेन्टी। उपचार को यो विधि को लाभ स्पष्ट छन्: एक बच्चाको शरीर मा कुनै पनि बाहिर हस्तक्षेप अनुपस्थित छ, कारण मांसपेशी रिकभरी र आफ्नो फाइबर को छोटा गर्न आत्म-निको छ।
तथापि, रिकभरी छैन परिणाम एक पटक र कमजोरीको वशमा पऱ्यौं बच्चाको लागि धम्की छैन हासिल गरिएको छ भनेर भन्न छ। अर्को वर्ष भन्दा, यो उनको हालत निगरानी गर्न आवश्यक छ, र जब रूपमा चाँडै सकेसम्म गुदा नहर मा स्थानच्युति मलाशय पुन: सीधा।
तपाइँको आफ्नो बच्चा prolapsed मलाशय कसरी सीधा गर्न?
को nuances उपकरण रिपोजिसन संग विशेष ध्यान थाह हुनुपर्छ। उमेर बिना बच्चा मा rectal स्थानच्युति (2 वर्ष वा6वर्ष) सरल हेरफेर को जरुरी आवश्यक छ। मुख्य कुरा बच्चा शान्त र सकेसम्म तनावमुक्त थियो भन्ने छ। बच्चा आफ्नो पछाडि झूठ गर्नुपर्छ। को precipitated खण्ड मलाशय चिल्लो स्नेहक गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि, पन्जा मा राख्दै, दुवै हात को र ऊर्जावान प्रयासमा बिना आफ्नो औंलाहरु लिएर, नरमररुपले र बिस्तारै पछि भित्र सीधा। सही किनारा प्रक्रिया spontaneously सही गुदा नहर मा prolapsed आन्द्रा प्रदर्शन किनभने, केन्द्रीय भाग बाट सुरु गर्नुपर्छ। एक पटक एक खण्ड कम भित्र आफूलाई पाउन, यो महत्त्वपूर्ण छ बच्चा बिस्तारै आफ्नो पेट मा अधिक बारी र आफ्नो चाक राख्न।
कसरी sclerotherapy छ
थप जटिल, उन्नत अवस्थामा, उपचार अस्पताल मा बाहिर छ र सामान्यतया सर्जन गर्न Resort। Sclerotherapy सर्जरी को एक विधि हो रूपमा, आज अक्सर लागू हुन्छ। प्रक्रिया विशेष एजेन्ट, जो कार्य paraproctium सुनिंनु निर्देशित छ को परिचय छ। थप त्यहाँ अपेक्षित सेल मृत्यु, scarring र मलाशय घटेका Tissues को उछाल बदलिएको छ जो छ। यो तपाईं दृढ आफ्नो epithelium र आन्द्रा को सतह समाधान गर्न अनुमति दिन्छ।
सम्भावित जटिलताहरू काठिन्य
यसैबीच, उपचार यस्तो विधिहरू गर्न बाल सर्जरी धेरै wary मनोवृत्ति को क्षेत्र मा विशेषज्ञहरु को बहुमत। यो कारण लागूऔषधको बारम्बार प्रशासन, साथै विकास आन्तरिक necrotic आंत्र पर्खाल जटिलताहरुलाई उच्च जोखिम छ। Sclerotherapy ठाउँ लिन रूढिवादी उपचार विकल्प पूर्ण असफल हुँदा मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, वा त्यहाँ उल्लंघनको पर्याप्त likelihood छ।
दोस्रो विधि समावेश सर्जरी rectopexy - Kümmel - प्रक्रिया Zerenina निम्न खींच-तल भाग हटाउन।
कुनै पनि अवस्थामा, छोराछोरीको आंत्र को हानि सहित हरेक रोग, उपचार गर्न भन्दा रोक्न धेरै सजिलो छ। कुनै पनि सम्भावित खतरहरुको रोक्न गर्नुपर्छ विकृति विकास रोक्न। विशेष मा, पट लामो अवधि लागि बस्न र कुर्सी को slightest उल्लंघन मा तत्काल कारबाही गर्न बच्चालाई जबरजस्ती छैन।
गर्मी स्ट्रोक लागि पहिलो सहायता: के?
उनको टाउको scratched किन छ?
किन म खाना को स्वाद महसुस छैन: कारणहरू
चाँदीका सिक्काहरू बचत बैंक: फोटो र लागत
बुझाने एजेन्ट: वर्गीकरण, आवेदन सुविधाहरू
कसरी मह जाँच गर्न
कागज बाहिर फोन आईफोन6कसरी बनाउने। मास्टर वर्ग
चक्कु आफ्नो हातमा flowlines। स्वचालित switchblade चक्कु: विशेषताहरु र समीक्षा
कसरी रंजक मिश्रण गरेर रंग देखि खैरो रंग प्राप्त गर्न
एक बगैचा षड्यन्त्र डिजाइन: सबै fixable